Ọ bụ n’ezie “Amamihe nke igwe mmadụ”? | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 18, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
"Amamihe nke igwe mmadu" yiri ka obu okwu anwansi a nke Web 2.0 na Isi mmalite. Ọ bụrụ na ị Google oge ahụ, enwere ihe dị ka nde 1.2, gụnyere Wikipedia, Blink, Mavericks na-arụ ọrụ, Starfish na Ududo, Wikinomics, Wdg
O bu Amamihe Ndi igwe mmadu?
IMHO, Ekwetaghị m. Ekwenyere m na ọ bụ egwuregwu nke ọnụ ọgụgụ na ihe gbasara nke puru omume. Hasntanetị enyela anyị ụzọ iji kwurịta okwu nke ọma site na email, engines ọchụchọ, blọọgụ, wikis na ọrụ mmeghe. Site na ikwuputa okwu a nye otutu nde mmadu, i ghaghi ichota amamihe nke nde. You're na - ewetara ụfọdụ ndị maara ihe na nde ahụ ozi ahụ.
Ọ bụrụ na ohere m inweta mmeri $ 1 nde bụ 1 na nde 6.5, enwere m ike ịzụta nke ọ bụla n'ime tiketi 6.5 ma merie. Agbanyeghị, ejiri m tiketi 1 merie m! Ọ bụghị amamihe nke ịzụ 6.5 nde tiketi… na ụdị ogbi ebe ọ bụ na m furu efu $ 5.5 nde ke ndibiat, ọ bụghị m? Itinye ozi na weebụ anaghị efu nde mmadụ, n'agbanyeghị - ọ na-abụ n'efu ma ọ bụ karịa obere cents.
Achọpụtara m na okwu ndị dị na blọọgụ m yiri nke a… ha na-agbakwunye isi ihe dị egwu na post. Enwere m mmasị ịza ajụjụ - ha na-eme ka mkparịta ụka ahụ na-aga n'ihu ma na-enye nkwado ma ọ bụ mmegide n'akụkụ isi m na-achọ ikwu. Agbanyeghị, maka mmadụ 100 ọ bụla gụrụ blọgụ m, naanị 1 ma ọ bụ 2 na-ede azịza. Nke ahụ apụtaghị na ndị na - agụ akwụkwọ ndị ọzọ amachaghị (ka emechara, ha na-agụ blọgụ m abụghị ya?;)). Ọ pụtara nanị na Amamihe nke igwe mmadu n'ihe gbasara ọdịnaya m, ọ bụ naanị ndị na - agụ akwụkwọ ole ma ole.
Ka ọ bụ Amamihe nke Iru Otu Igwe?
Otú ọ dị, site n'inwetakwu ihe, enwere m ike ijide mmadụ ole na ole na-agụ ya. Ikekwe ọ bụghị ya Amamihe nke igwe mmadu, ọ bụ n'ezie Amamihe nke Iru Ìgwè mmadụ.
Ikekwe ọ dị ka okushon, ebe ọnụahịa ikpeazụ na-agbago ụgwọ ndị na-eso ụzọ. N'okwu a, ndị ọgụgụ isi na-eme ka ndị nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ - “Dị ka ígwè na-amụcha ígwè, otú ahụ ka otu onye na-amụ nkọ nke onye ọzọ.” (Mmeb. 27:17)
Nke ahụ bụ akụkụ na-adọrọ adọrọ na nke a nke m na-echeghị. Ahụrụ m Ilu aka. Daalụ, Christine!
"? Ga - ewetara ụfọdụ ndị maara ihe na nde ahụ ozi ahụ"
N'aka nke ọzọ, ndị ọzọ na-ahọrọ nke ọkara eziokwu ma na-agbada ụgha ziri ezi, ma n'aka nke ya na-emezigharị ozi ahụ na ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịkele blọọgụ na forums maka nke a 😉
N'aka nke ọzọ, mgbe m hapụsịrị saịtị gị, agara m na peeji nke echiche nke akwụkwọ akụkọ mpaghara na blọọgụ ọzọ. Enweghị m mmasị ụfọdụ n'ime mkparịta ụka ndị ahụ gbasara okwu ndị metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Aga m asị na ha na-agakarị ụzọ ọzọ.